Ikhasino ye-Fastpay -Ubhaliso, indawo esemthethweni, isiqinisekiso
Iimpawu zobhaliso kwikhasino ye-Fastpay
Kutheni le nto kufuneka ubhalise
Ngubani onokubhalisa kule ndawo
Ubhaliso kwiwebhusayithi yekhasino ye-Fastpay
Ulwazi olubalulekileyo malunga nobhaliso
Ngaphandle kwenani elikhulu leekhasino ezikwi-Intanethi ezibonakala rhoqo kwi-Intanethi, uphawu lwe-Fastpay Casino oluncinci ngokuzithemba lufumana ukuthandwa kwaye lunokubanga ukuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokungcakaza. Iklabhu isebenza phantsi kwelayisensi enenombolo yobhaliso engu-8048/JAZ2020-013 ekhutshwe ngurhulumente weCuracao. Umgaqo-nkqubo wale ndawo ujolise ekudaleni imeko entle kakhulu yokungcakaza okunomdla, kunye nokuzaliswa okukhawulezayo okunokubakho kunye nokurhoxiswa kwemali ephumeleleyo.
Zininzi izizathu zokuba kutheni iindwendwe kufuneka zibhalise kwi- Fastpay Casino . Eyona iphambili kukufumana isikhundla selungu elisemthethweni leklabhu, evula amathuba amaninzi ongezelelweyo kubasebenzisi.
Ukongeza ekufumaneni iphakheji eyamkelekileyo, enikezelwa kubo bonke abaqalayo, eli ziko lenza inkqubo yokungcakaza ukuba ibe yinto enomdla ngokubonga kunyuselo, iikhowudi zentengiso, inkuthazo eyahlukeneyo ngohlobo lokujikeleza simahla kunye nenkqubo yeVIP. Kwakhona, iindwendwe ezisebenzayo zinokufumana izipho zeholide, usuku lokuzalwa, njl.
Esinye isizathu sokwenza iakhawunti yobuqu kwiwebhusayithi esemthethweni yeKhasino yingqokelela enkulu yoomatshini ekufakwa abasuka kubaphuhlisi ababalaseleyo. Ukuyidlala ngemali yokwenyani kunokunyusa kakhulu ukukhawulezisa kwe-adrenaline kunye nokwanelisa umnqweno wolonwabo.
Abaxumi ababhalisiweyo babonisa idatha yobuqu, ke ngoko, bayakuvumela ukulawulwa kweziko ukulawula iminyaka yeendwendwe zalo, ngaphandle kokuhlala kwiwebhusayithi esemthethweni yabantwana.
Abasebenzi beziko baqinisekisile ukuba inkqubo yobhaliso ayiphazamisi abasebenzisi kwaye yenza ukuba kube lula kangangoko kunokwenzeka. Ayizukubangela ubunzima nkqu nakwabaqalayo abagqibe ekubeni baziqhelanise nehlabathi lokungcakaza okokuqala. Inkqubo ivumelekile:
abahlali abadala bala mazwe omthetho wawo ungakuthinteliyo ukwenziwa kokonwaba kwindawo ebonakalayo;
abasebenzisi abangenangxaki yokulutha ukungcakaza kwaye abekho kuluhlu lweendwendwe ezingafunekiyo kwindawo leyo.
Abahlali bamazwe angaphezu kwe-100 banokubhalisa ngokusesikweni kwikhasino ye-Fastpay. Phakathi kwabo kukho amazwe e-CIS, kunye nakwamanye amazwe asondeleyo. Abahlali base-UK, i-USA, iSpain, i-Israel kunye namanye amazwe abavumelekanga ukuba benze i-akhawunti kweli ziko. Uxanduva lokungathobeli imigaqo kunye nomthetho lilele kubadlali, ke ngoko, ngaphambi kokuba uqhubeke nobhaliso, kufuneka uziqhelanise nemithetho elawula ukungcakaza kwingingqi yokuhlala.
Iindwendwe ezingaphantsi kweminyaka akufuneki zizame ukukhohlisa inkqubo kwaye zinike ulwazi olungeyonyani, kuba Ngexesha lokuqinisekisa, inkohliso iya kutyhilwa kwaye iakhawunti iya kuvalwa. Abasebenzisi banokufikelela kwisiza kwaye bazigqibele ngokuzimeleyo ngesidingo sale nkqubo.
Nawuphi na umntu ongcakazayo ogqibe ekubeni asebenzise izibonelelo zesiza kwaye aqale ukudlala imali yokwenyani angavula iakhawunti yobuqu ekhasino. Iqhosha lokubhalisa likho kwiphepha eliphambili lewebhusayithi esemthethweni phezulu kwesikrini. Emva kokucofa, ifestile iyavela ngamacandelo afuna ukukhankanywa:
eyona dilesi yebhokisi ye-imeyile eyeyomdlali;
Imali esetyenziselwa iakhawunti ezayo.
Kuyimfuneko kwakhona ukuqinisekisa ukuba umthengi ngumntu omdala kwaye, emva kokuyifunda ngocoselelo imigaqo, uyavumelana nayo. Ukongeza, ukuba unqwenela, umsebenzisi angangenisa ikhowudi yokwazisa, ukuba unayo.
Emva kokugqitywa, ukulawulwa kwesiza kuthumela ileta kumxhasi kwidilesi ye-imeyile echazwe nguye. Inekhonkco lokuvula eliza kukuvumela ukuba ugqibezele inkqubo yobhaliso.
Ukufumana ukufikelela kwiakhawunti yobuqu, umntu ongcakazayo kufuneka anikezele ngolwazi oluthe kratya ngaye. Ukwenza oku, kufuneka uchaze igama lakho elipheleleyo, umhla wokuzalwa, ubumi, kunye nenombolo yomnxeba. Kuphela emva koko kuya kufuneka uye kwicandelo le "Cashier" kwaye uqalise ukuzalisa idipozithi.
Abathengi ababhalisiweyo banokujongana nenkqubo enjalo njengokuqinisekisa. Isetyenziselwa ulawulo lweziko ngezizathu ezininzi, ezona ziphambili zezi:
ukuqinisekiswa kwesininzi somsebenzisi;
urhano lwezenzo zobuqhetseba ezichasene neqonga le-Intanethi okanye inkqubo yentlawulo;
utyelelo lomsebenzisi kwisiza kwiidilesi ezahlukeneyo ze-IP;
ukuqinisekiswa kwesazisi somngcakazo ogqibe ekubeni arhoxise inzuzo;
xa urhoxisa okuphumelela, inani lazo lingaphezulu kwamawaka amabini eedola zaseMelika.
Inkqubo iya kudlula ngaphandle kwengxaki ukuba ongcakazayo, ngelixa esenza iakhawunti, uchaze ngokuchanekileyo idatha yakhe kwaye wayigcwalisa ngokuchanekileyo iphepha lemibuzo kwiakhawunti yakhe. Ulawulo lwesiza lujonga ngononophelo ulwazi olufunyenwe kubasebenzisi kwaye, ukuba ukungangqinelani kufunyenwe, kunokumisa ukurhoxiswa kwemali de iimeko zicaciswe.
Xa ujongene nengxaki efanayo, ungakhathazeki. Kuyimfuneko ukuba uqhagamshelane nenkonzo yenkxaso yezobuchwephesha, ethi nangaliphi na ixesha ilungele umxhasi, incede ekusombululeni yonke imiba ethe yavela.
Ukuqinisekiswa kuthetha ukubonelelwa kwamaxwebhu anjalo: amaphepha okuskenwa kwepasipoti enomfanekiso womnini kunye nokubonisa indawo yobhaliso. Inani kunye noluhlu lwesazisi lunokushiywa. Uyakufuna kwakhona umfanekiso weskrini kunye nedatha ekuzaliseni i-wallet ye-elektroniki okanye isitatimende ekhadini elisetyenziselwa ukuzalisa idiphozithi kunye nokukhupha imali. Kwiimeko ezinzima kakhulu, inkonzo yezokhuseleko inokucela umntu ongcakazayo ukuba athathe "i-selfie" ephethe uxwebhu ngesandla kunye nesiqinisekiso somhla othathwe ngawo loo mfanekiso.
Yonke imiba yokuqinisekisa inokufumaneka kwiwebhusayithi yekhasino ekhawulezayo
Kukho inani lemithetho malunga nokwenza iakhawunti kwindawo esemthethweni yendawo, engafanele ilibaleke. Okokuqala, umthengi kufuneka akhumbule ukuba unelungelo lokuba neyodwa:
ikhadi lebhanki okanye i-e-wallet;
Ulawulo lweziko luthathela ingqalelo ukuba abadlali baneeprofayili ezimbini okanye nangaphezulu zobuqhetseba kwaye babathintela kwangoko emva kokubona ulwaphulo. Kwiimeko ezininzi, kuthathwe imali eseleyo.
Ukuba, ngelixa uzalisa umhlaba wobhaliso, umthengi ubonakalise uhlobo olungalunganga lwemali, unokuhlala elungisa oku kwiakhawunti yakhe ngokutshintsha iakhawunti yemali kwicandelo elifanelekileyo.
Ukuqinisekisa ukhuseleko lwedatha yobuqu, indawo ithatha amanyathelo okhuseleko kwaye imema abasebenzisi ukuba benze okufanayo. Akufuneki ubonelele ngokufikelela kwiprofayile yakho kwiwebhusayithi esemthethweni yekhasino ye-Fastpay kubantu besithathu, kunye nokubanika iphasiwedi.
Indawo iqinisekisa ukhuseleko lolwazi lomntu kwaye ayivumeli ukuba ingene kwinkonzo yerhafu, iiarhente zokunyanzeliswa komthetho okanye umntu wesithathu. Banokujongwa linani eliqingqiweyo labasebenzi bendawo ebonakalayo enenqanaba elifanelekileyo lokhuseleko.
Ukuze kupheliswe urhano lwezenzo zobuqhetseba, iziko lolawulo linokucela amaxwebhu kumthengi ukuba aqinisekiswe.